Raha Handalo Aty Madagasikara Ianao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Avrily 2014 14:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Svenska, မြန်မာ, polski, 日本語, English
Anisan'ny tsy zakan'ireo mponina ity karazana fitohanan'ny fiara ity ka mandinika ny tokony hametrahana lalana fitatera-mihantona eo amin'ireo tampon'ny vohitra be olona indrindra ao an-tanàndehibe ny fitantanana an'Antananarivo:
Ity zotra ity dia hampitohy ny Tanàna Ambony amin'i Mahamasina. Na dia izany aza, mbola tsy nanome ny antsipirahany mikasika ny fanombohan'ny asa na ny tetibolan'ny tetikasa ny Filohan'ny Delegasiona Manokana. Mikasika ny fampiasana izany fitatera-mihantona andrenivohitra izany kosa, hampihatra ity rafitra fitaterana iombonana ity aorian'i La Paz ny renivohitra.
Manoloana ny vola ilaina amin'ity tetikasa ity (tombanana ho € 166 tapitrisa na 230 tapitrisa dolara tamin'ny fananganana tao La Paz) sy ny fahantrana lalina ao andrenivohitra, maro ireo manontany raha ilaina marina ny tetikasa tahaka izany. Marc Harmelle nanoratra hoe [fr]:
Raha anisan'ny olana goavana ao an-tanàndehibe ny fitohanan'ny fiara, mila asa fanamboarana goavana ihany koa ireo lalana rezionaly. Nanamarika ny lohatteny lehibe tao amin'ny gazety Tribune fa mbola maro ny zavatra tokony atao [fr]:
Nanipika i Ariniaina, mpanoratra ato amin'ny Global Voices monina eto Madagasikara fa niova ny lalàna mikasika ny posiposy eto Madagasikara, saingy mbola fitaovam-pitaterana be mpampiasa hoan'ireo mponina marobe ao amin'ny faritra (Antsirabe) izany: